Jikọọ Metal na Brazing na ịgbado ọkụ Usoro Teknụzụ
E nwere ọtụtụ ụzọ dị maka ijikọta ọla, gụnyere ịgbado ọkụ, brazing na ịgbado ọkụ. Kedu ihe dị iche na ịgbado ọkụ na brazing? Kedu ihe dị iche na brazing na ịgbado ọkụ? Ka anyị nyochaa ọdịiche yana mgbakwunye uru yana ngwa ngwa. Mkparịta ụka a ga-eme ka nghọta gị banyere ịbịanye igwe mekwuo ka ị mata ezigbo ụzọ maka ngwa gị.
OT B bras ọrụ
A nkwonkwo brazed a na-eme ya n'ụzọ dị iche kpamkpam site na nkwonkwo welded. Nnukwu ọdịiche dị na okpomọkụ - brazing anaghị agbazekwa ọla ọla. Nke a pụtara na ọnọdụ brazing na-adịkarị ala karịa ebe agbaze nke ọla ala. Brazing okpomọkụ dịkwa oke ala karịa okpomọkụ ịgbado ọkụ maka otu isi ọla, na-eji obere ume.
Ọ bụrụ na brazing anaghị agwakọta isi ọla, kedu ka o si esonyere ha? Ọ na-arụ ọrụ site na ịmepụta njikọ dị n'etiti igwe na-ekpo ọkụ na akụkụ nke ọla abụọ ahụ na-esonye. Kpụrụ nke nke na-esite na ya na-adọta ígwè site na nkwonkwo iji mepụta nkekọ a bụ ọrụ okpu. N'ime ọrụ nkwado, ị na-etinye okpomọkụ sara mbara na ọla ndị ahụ. Mgbe ahụ, a na-ebutezi igwe ahụ na akụkụ ndị ahụ kpụ ọkụ n'ọnụ. A na-agbaze ya site na okpomọkụ dị na ọla ala ahụ wee dọta ya site na ọrụ okpu kpamkpam site na nkwonkwo. Nke a bụ otu esi eme nkwonkwo brazed.
Ngwa Brazing gụnyere elektrọnik / eletriki, ikuku, ụgbọ ala, HVAC / R, iwu ihe na ndị ọzọ. Ihe omuma atu sitere na sistem nke ikuku maka ugbo ala rue na ihe ndi ozo nke ugboelu na ihe ndi ozo na ihe ndi ozo. Brazing na-enye nnukwu eleba anya na ngwa ndị chọrọ ijikọ nke ọla ndị dị iche, gụnyere ọla kọpa na nchara yana ndị na-abụghị ọla dị ka tungsten carbide, alumina, graphite na diamond.
Uru Nkọwa. Nke mbụ, ihe nkedo brazed bụ nkwonkwo siri ike. Ngwunye a kwadoro nke ọma (dịka nkwonkwo welded) ga-adị ọtụtụ ike ma ọ bụ sie ike karịa ọla ndị ejikọtara. Nke abuo, a na-eme nkwonkwo na obere okpomọkụ, site na ihe dịka 1150 ° F na 1600 ° F (620 ° C na 870 ° C).
Nke kachasị dị mkpa, a naghị agbaze ọla ala. Ebe ọ bụ na a naghị agbaze ọla ndị bụ isi, ha nwere ike idowe ọtụtụ ihe ha nwere. Eguzosi ike n'ezi ihe nke metal a bu ihe eji mara ihe nkwonkwo brazed nile, tinyere ihe di nkpa na nke di nkpa. Ọzọkwa, obere okpomọkụ na-ebelata ihe ize ndụ nke mgbagwoju anya igwe ma ọ bụ na-agba agba. Tụlee kwa, na obere okpomọkụ chọrọ obere okpomọkụ - ihe dị mkpa na-azọpụta ego.
Uru ọzọ dị mkpa nke brazing bụ ịdị mfe nke ijikọta ọla ndị dị iche iche site na iji allol na-agbanwe agbanwe ma ọ bụ na-ekpuchi / mkpuchi. Ọ bụrụ na ịnweghị ka agbaze ọla ndị bụ isi iji sonyere ha, ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ha nwere ebe mgbaze dị iche iche. Nwere ike ọla nchara na ọla kọpa dị ka nchara nchara. Eldgbado ọkụ bụ akụkọ dị iche n'ihi na ị ga-agbaze ọla ndị ahụ iji jikọta ha. Nke a pụtara na ọ bụrụ na ị gbalịa ịgbanye ọla kọpa (ebe agbaze 1981 Celsius F / 1083 Celsius) na nchara (ebe agbaze 2500 Celsius F / 1370 Celsius C), ị ga-eji usoro ịgbado ọkụ dị oke ọnụ ma dịkwa oke ọnụ. Udo zuru oke nke isonyere ọla ndị dị iche iche site na usoro brazing dị iche iche pụtara na ị nwere ike ịhọrọ ọla ọ bụla kachasị mma maka ọrụ nke nzukọ ahụ, ebe ị maara na ị gaghị enwe nsogbu isonyere ha n'agbanyeghị agbanyeghị ebe ha dị iche na ọnọdụ mgbaze.
Ọzọkwa, a nkwonkwo brazed nwere ọdịdị dị mma, dị mma. Enwere ntụnyere abalị na ehihie n’etiti pere mpe, akwa mmiri nke nkwonkwo brazed na akwa bekee na-adịghị mma nke nkwonkwo agbadoro. Njirimara a dị mkpa karịsịa maka nkwonkwo na ngwaahịa ndị ahịa, ebe ọdịdị dị oke egwu. Enwere ike iji nkwonkwo brazed mgbe niile "dị ka ọ dị," na-enweghị ọrụ mmecha ọ bụla achọrọ - nchekwa ego ọzọ.
Brazing na-enye ohere ọzọ dị mkpa karịa ịgbado ọkụ na ndị ọrụ ahụ nwere ike nweta nkà brazing ngwa ngwa karịa ọrụ ịgbado ọkụ. Ihe kpatara ya bu na onodu puru iche di n'etiti usoro abuo a. A linear welded nkwonkwo ga-deere na kpọmkwem mmekọrịta nke okpomọkụ ngwa na deposition nke dịanyā metal. Ihe nkwonkwo brazed, n'aka nke ọzọ, na-eme "ịme onwe ya" site na ọrụ okpu. N'ezie, otu akụkụ dị ukwuu nke nkà metụtara brazing sitere na nhazi na injinia nke nkwonkwo ahụ. Ngwakọta ọsọ nke ọzụzụ nke ndị ọkachamara nwere nkà bụ ihe dị mkpa ọ ga-efu.
N'ikpeazụ, ígwè brazing dịtụ mfe iji rụọ ọrụ. Njirimara nke usoro brazing - ngwa ọkụ sara mbara na ịdị mfe nke ntinye igwe - nyere aka wepu nsogbu. Enwere ọtụtụ ụzọ iji kpoo nkwonkwo na akpaghị aka, ọtụtụ ụdị brazing na-etinye ọla na ọtụtụ ụzọ iji debe ha ka ọrụ brazing nwere ike isi rụọ ọrụ ngwa ngwa maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkwa ọ bụla.
OZI NA-AKW WKWỌ
Eldgbado ọkụ na-esonye ọla site na-agbaze ma na-agbakọta ha ọnụ, na-agbakwunye na mgbakwunye nke ihe ntanetị. Njikọ ndị e mepụtara siri ike - na-adịkarị ike dịka ọla ndị ahụ sonyere, ma ọ bụ karịa ike. Iji gwakọta ọla ndị ahụ, ị ​​na-etinye ọkụ ọkụ na mpaghara nkwonkwo. Okpom oku a gha aghaghi ibu ochicho elu nke igwe iji gbazee ihe ndi ozo (ọla a na-esonye ya) na ihe ndi edozi. Ya mere, ịgbado ọkụ okpomọkụ na-amalite na agbaze ebe nke isi ọla.
Eldgbado ọkụ na-adịkarị mma isonyere nnukwu mgbakọ ebe akụkụ abụọ nke ígwè dị oke (0.5 ”/12.7mm) ma sonye n'otu ebe. Ebe ọ bụ na bekee nke nkwonkwo welded adịghị agbanwe agbanwe, a naghị ejikarị ya na ngwaahịa ndị chọrọ nkwonkwo ịchọ mma. Ngwa ndị a gụnyere njem, iwu ụlọ, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ụlọ nrụzi. Ihe atụ bụ mgbakọ robotic gbakwunyere mgbanaka nke arịa nrụgide, àkwà mmiri, ihe owuwu ụlọ, ụgbọ elu, ụgbọ oloko na ụzọ egwu, paịpụ na ndị ọzọ.
Uru Nkọwa. N'ihi na ịgbado ọkụ okpomọkụ bụ oké, ọ na-Elezie metụtara nanị akụkụ ụfọdụ na pinpointed; ọ baghị uru itinye ya n'ọrụ n'otu ebe gabigara ókè. Akụkụ a akọwapụtara nwere uru ya. Iji maa atụ, ọ bụrụ n ’ịchọrọ isonye n’obere obere ọla n’otu ebe, ụzọ ịgbado ọkụ si arụ ọrụ bara uru. Nke a bụ ụzọ ngwa ngwa, nke akụ na ụba iji mee nkwonkwo siri ike, na-adịgide adịgide site na narị otu narị na puku.
Ọ bụrụ na nkwonkwo ahụ dị n'usoro kama ịkọpụta ya, agbanyeghị, nsogbu na-ebilite. The metụtara nanị akụkụ ụfọdụ okpomọkụ nke ịgbado ọkụ nwere ike ịghọ mwepu. Iji maa atụ, ọ bụrụ n’ịchọrọ ịpinye-igwe igwe abụọ, ị ga - ebido n’ibugharị ọnụ akụkụ ọla ahụ iji nye ohere maka igwe na - echekwa ọkụ. Mgbe ahụ ị weld, buru ụzọ kpoo otu njedebe nke ebe nkwonkwo ka ọ na-agbaze okpomọkụ, wee jiri nwayọ na-ebugharị okpomọkụ n'akụkụ ahịrị nkwonkwo, na-edebe ọla nchara na mmekọrịta yana okpomọkụ. Nke a bụ ahụkarị, ot ịgbado ọkụ ọrụ. Emere nke ọma, nkwonkwo a welded dịkarịa ala dị ike dị ka ọla ndị ejikọtara.
Otú ọ dị, e nwere ọghọm dị na usoro a-njikọ-ịgbado ọkụ. A na-eme nkwonkwo na nnukwu okpomọkụ - dị elu iji gbazee ma ọla ala na ọla na ọla. Ọnọdụ okpomọkụ ndị a dị elu nwere ike ibute nsogbu, gụnyere ntụgharị nke ọma na ntụgharị nke ọla ndị bụ isi ma ọ bụ nrụgide n'akụkụ mpaghara weld ahụ. Ihe ize ndụ ndị a pere mpe mgbe ọla a na-esonye buru ibu, mana ha nwere ike bụrụ nsogbu mgbe ọla ndị ahụ bụ akụkụ dị mkpa. Ọzọkwa, okpomọkụ dị elu dị oke ọnụ, ebe ọ bụ na okpomọkụ bụ ume na ume na-efu ego. Ihe ikpo ọkụ ị chọrọ iji mee nkwonkwo, otú ahụ ka nkwonkwo ga-eri iji mepụta.
Ugbu a, tụlee usoro ịgbado ọkụ nke akpaghị aka. Gịnị ga-eme ma ọ bụrụ na i sonyere, ọ bụghị otu mgbakọ, kama ọtụtụ narị ma ọ bụ ọtụtụ puku mgbakọ? Eldgbado ọkụ, site na ọdịdị ya, na-eweta nsogbu na akpaaka. Nkwonkwo na-eguzogide ọgwụ na-arụ na otu ebe dị mfe iji rụọ ọrụ. Agbanyeghị, ozugbo isi ihe ahụ ghọrọ ahịrị - eriri njikọ - ọzọ, ahịrị a ga-akara. Ọ ga-ekwe omume iji rụọ ọrụ a na-arụ ọrụ, na-ebugharị eriri njikọ, dịka ọmụmaatụ, n'oge gara aga ebe a na-ekpo ọkụ ma na-ehichapụ waya na-akpaghị aka site na nnukwu spools. Otú ọ dị, nke a bụ ihe mgbagwoju anya ma dịkwa mkpa, ọ bụ naanị mgbe ị nwere nnukwu mmepụta ihe yiri nke ahụ.
Buru n'uche na usoro ịgbado ọkụ na-emeziwanye. Can nwere ike ịgbado ọkụ na usoro nrụpụta site na ikuku elektrọn, ike mgbapụta, esemokwu na ụzọ ndị ọzọ. Usoro ndị a dị elu na-akpọkarị maka ngwa ọrụ pụrụ iche ma dị oke ọnụ tinyere mgbagwoju anya, ntọala na-ewe oge. Tụlee ma ọ bụrụ na ha bara uru maka mmepụta mkpụmkpụ karịa, mgbanwe na nhazi nzukọ ma ọ bụ ihe ndị chọrọ ijikọ ụbọchị iji na-arụ ọrụ ụbọchị.
Họrọ Rightlụ Metzọ Kwesịrị Ekwesị
Ọ bụrụ na ịchọrọ nkwonkwo nke nwere ike na-adịgide adịgide ma sie ike, ị nwere ike belata igwe gị na-esonye na ịgbado ọkụ na ịgbado ọkụ ịgba egwu. Eldgbado ọkụ na brazing na-eji okpomoku na ọla. Enwere ike ịrụ ha abụọ na usoro mmepụta. Otú ọ dị, myirịta na-ejedebe ebe ahụ. Ha na-arụ ọrụ dị iche iche, yabụ cheta echiche ndị a na-atụgharị anya na mgbatị:
Size nke nzukọ
Ọkpụrụkpụ nke isi metal ngalaba
Abù ma ọ bụ akara nkwonkwo chọrọ
Ikpeazụ nzukọ ibu mkpa
Nhọrọ ndị ọzọ? Ihe nkwonkwo ejikọtara ọnụ (eri, staked ma ọ bụ riveted) n'ozuzu ha anaghị atụnyere nkwonkwo nkwonkwo na ike, iguzogide ujo na ịma jijiji, ma ọ bụ nkwụsị. Nrapado njikọ na soldering ga-enye agbụ na-adịgide adịgide, mana n'ozuzu, enweghị ike ịnye ike nke nkwonkwo brazed -ihe nhata ma ọ bụ karịa karịa nke ọla ọla ala n'onwe ha. Ha enweghị ike, dị ka a na-achị, ịmepụta nkwonkwo na-enye nguzogide okpomọkụ karịa 200 Celsius (93 Celsius C). Mgbe ịchọrọ nkwonkwo ígwè siri ike ruo mgbe ebighị ebi, brazing bụ ọgụ dị ike.
Categories Technologies Tags ịgba egwu, brazing nkwonkwo, otú brazing si arụ ọrụ, otú ịgbado ọkụ ọrụ, Ngwunye brazing, metal itinye n'ọkwa, isonyere brazing, tinggbado ọkụ, ígwè brazing, ígwè brazing okpomọkụ, Ngwunye brazing, metal ịgbado ọkụ, metal ịgbado ọkụ okpomọkụ, ịgbado ọkụ Mail igodo